DC Deep Drawing Aluminium Circles, Commercial Grade 3003 Aluminum Sheet Circle - Zhejiang Shuanglin Jiate Metal Technology Co., Ltd
Ny Aluminium Circle dia ampiasaina amin'ny fanaovana haavo, toy ny non-stick pan, pressure cooker, hardware ary ny fitaovana cookie sy ny sisa. Aluminum Round Sheet dia vokatra tena be dia be ampiasaina, haingam-pandehanana mahery, fantson-koditra tsara, kalitao anodized sy ny kalitao lalina izay mety ho an'ny cookware koa.
1. Fihetseham-po sy tanjaka mahery vaika;
2. Ny fahombiazan'ny fitantanana dia tsara, mametaka, manamboatra ny haavony;
3. Fiatoana amin'ny angovo, fiarovan'ny hydrogène, fiarovan'ny fanoherana sy ny fahasitranana;
4. Amboarina plastika, fitondran-tena ary fitondran-tena fitaratra;
5. Mora mandray ny karazana fanodikodinana fanerena sy fanitarana, mandondona;
Famoronana anarana DC Deep Drawing Aluminium Circles, Commercial Grade 3003 Aluminum Sheet Circle
Aluminium Circle Thickness 0.40mm-6mm
Aluminium Circle Diameter 100mm-1600mm
Amin'ny famokarana, tsy maintsy mikarakara ny rohy rehetra, ny tsipiriany rehetra, ary ny asa rehetra araka ny tokony ho izy isika mba hiantohana ny kalitao avoakan'ny vokatra. Noho izany,
Fomba fiasa manontolo, avy amin'ny alim-boboka, ny famokarana, famarana, fanasan-damba ary ny rohy hafa mba hitadiavana, hifehezana ary hitarika ny fanaovana haody tsara.
1050 Aluminum Circle, 1060 Aluminum Circle, 1100 Aluminum Circle, 5052 Aluminum Circle, Fonosana Aluminium Deep